Field Supervisor | Golden Hawks International Limited. ﻿
31.8.2019, Full time , Business Service
•	မိမိတာဝန်ယူထားသောလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာTraining များကို ပြန်လည်သင်ကြားနိုင်ရမည်။
•	Under Pressure ဒဏ်ခံနိုင်ပြီးTarget ပြည့်မီ အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ပြီးအများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။
•	ဘွဲ့ရ၊ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၁) နှစ် နှင့်အထက်ရှိရမည်။
•	Microsoft Office ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရ မည်။
Work location No. 15, (88) Street,Mingalartaungnyunt Township.
165 Days, Full time , Business Service
166 Days, Full time , Business Service
167 Days, Full time , Business Service
168 Days, Full time , Business Service
Field Supervisor HR,Training & Recruitment Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Golden Hawks International Limited HR,Training & Recruitment jobs HR,Training & Recruitment jobs Business Service Jobs in Myanmar, jobs in Yangon